Khariidado u samee oo qorshee jidka u adeegso BBBike - Geofumadas
Disember, 2017 Google Earth / Maps
BBBike waa codsi ujeedkiisu yahay in la siiyo qorsheeyaha safarka ee socdaalka, isticmaalka baaskiilada, magaalada dhexdeeda iyo hareeraheeda.
Sideen u abuuri karnaa qorsheeyahayaga wadada?
Hirgalinta, haddii aan galno goobtaada web, waxa ugu horreeya ee la ina tusayo waa liis ay ku qoran magacyada magaalooyinka kala duwan, kuwaas oo ay suurtagal tahay in ay doortaan mid ka mid ah iyaga oo isticmaalaya mouse click.
Sida aad u aragto, liiska magacyada magaalooyinku ay ka soo muuqdaan. Markaad dooranayso mid ka mid ah, waxaan soo galeynaa shaashad cusub oo noo ogolaanaysa in aan qeexno wadadeena. U sheega inaan dooranay London (London):
Marka waddada lagu qeexo, warbixin la socoto xogta lagama maarmaanka ah waa la helay:
TALO: Ogsoonow in dusha sare daaqada muhiimka ah xidhiidhka cagaaran wuxuu u muuqdaa, kaas oo "wax" la soo dejiyey qaabka kml, maxay noqon doontaa?
Sidee loo bixiyaa BBBike?
Waxay inoo sheegaan in ay jiraan diyaar laba nooc ee BBBike, "web-ku-saleysan" (midka aan muujineyno) iyo "madaxbannaan" si loo soo dejiyo. Xaaladda dambe, waxaa habboon in la akhriyo dukumeentiyo kaas oo lagu heli karo adoo gujinaya ikhtiyaarka "I caawi"Laga soo bilaabo menu ku yaal geeska bidix ee hoose ee daaqada weyn:
Waxaa jira xitaa mobile mobile, laakiin, waxaan ku celinaynaa, waxaa habboon in la akhriyo dukumeentiyo hore.
Waa maxay sifooyinka ugu muhiimsan ee BBBike?
Laga soo bilaabo waxa lagu duubay dukumeentiyo, waxaan cadeyneynaa:
Waxa ku jira in ka badan magaalooyinka 200 ee adduunka oo dhan.
Taageerada wax ka badan noocyada map 17 (oo leh lakabyo kala duwan) OpenStreetMap, Google, iyo Bing.
Suurtagalnimada in la dhoofiyo jidadka GPS sida GPX ama KML
Warbixinnada lagu daabacay qaabka PDF ama lagu keydiyay telefoonka gacanta
Wargelinta xogta laga bilaabo OpenStreetMap asbuuc kasta.
Waa maxay BBBike?
BBBike ayaa loo sameeyey si loo abuuro qorshooyin wadooyin masaafo gaaban, inta u dhaxaysa 5 iyo qiyaastii 15 km, oo faa'iido u leh baaskiilada. Maya Waxaa loogu talagalay gargaar loogu tala galay dalxiisyada ama socodka.
Qalab noocee ah ayaa ka dhigaya BBBike?
Haddii aan dooran karno doorashada "qalab"Laga soo bilaabo menu weyn, waxaan soo galinnaa shaashad cusub oo taxeysa qalabka sameynta codsigan:
Waxaanu ku faahfaahin doonaa, ficillada ballaaran, macluumaadka ku saabsan qalabka:
a) Codsiga BBBike
Tani waa hab kale oo lagu soo gaabiyo loo yaqaan "version madax banaan". Waxaan ku talineynaa in aan u fiirsanno calaamadaha iyo sida loo raadsado magaalooyinka. Haddii aan soo dejinno oo aan rakibno 'nambarka madax-bannaan' waxaan helaynaa wax sidan oo kale ah. Waxaa jira laba luqadood oo keliya oo la heli karo: Jarmal iyo Ingiriisi.
La dukumeentiyo Waxa kale oo ay ina tusaysaa laba amar oo aan isticmaali karno iyadoo ku xiran hadba kiiska:
b) Adeegga mashiinka BBBike
Isticmaal mareegta masaajidkaaga. Khariidada la muujiyey ayaa lagu heli karaa qaab mapnik. Tani waa codsi kuu ogolaanaya inaad sawirtid khariidado leh tayada muuqaalka wanaagsan adoo isticmaalaya algorithms si dhakhso ah oo loogu talagalay.
c) Khariidada Isbarbardhig
Qalabkan waxaa abuuray by Geofabrik. Nooca ugu dambeeyay ee qalabkani wuxuu taageersan yahay khariidadaha 52 ee shaashadda iyo weliba qaabka shaashadda buuxda.
d) OpenStreetMap waxay ka saartay adeegga
Waxay u ogolaataa aagagga soo saaridda ee heerka ugu sareeya uu yahay 960,000 km2, taas oo ah, aagga jiida ee 1200 km by 800. Marka aan soo galo markii ugu horeysay, waxa ay ina tusinaysaa macallin yar oo ah sida loo isticmaalo qalabkaan:
Halkan waxaan ku sameyn karnaa qaar ka mid ah fiirinta:
Goobta la rabo. Maqnaanshaha arrinta. Waa hagaag, sida aad u arki karto, khariidada lagu soo bandhigay bogga iyada oo ay ku xiran yihiin Waa mid ka mid ah Berlin iyo hareeraheeda. Maxaa dhacaya haddii aan rabno magaalo kale? Fure ayaa ku jira "Tusiyaha Fudud iyo Fuulida" badhan:
Which, marka firfircoon, muujinaysaa sanduuqa la doonayo:
Noocyada la heli karo. Si taxaddar leh u fiirso liiska hoos-u-dhaca. Halkan qaabka kml ma muuqan. Si aad u tixgeliso ...:
WAXYAABAHA LOOGU TALAGALAY. Haddii aanad garanaynin isku-duwayaasha goobta aad rabto inaad soo qaadato khariidad, sababtoo ah waa bilow bilow ah, ama sababtoo ah waxaad u maleysey meel aan rasmi ahayn oo aadan aqoon, tallaabooyinka aasaasiga ahi waxay noqon doonaan:
- Ka raadi Google isku-duwayaasha meesha aad la shaqeyn doonto.
- Waxaa la doorbidi karaa inaad isticmaasho qiimaha rukunka iyo dhererka saxiix (haddii uu leeyahay mid) iyo Solo oo leh dhibco jajab tobanle. Ha isticmaalin qiimaha daqiiqado iyo ilbiriqsi. Gali labada qiimood ee ugu horreeya (Loo-hooseeyo) oo kala gooyo "1" ama "2" oo ah meesha ugu yaraan tobanaad ee qiimaha la mid ah si aad ugu geliso safka labaad (geeska sare)
- Raac tallaabooyinka tababarka ay bixiso barnaamijka (eeg khadadka sare). Xilliga ka dib, isku-xirka xariirka ayaa soo gaari doona xisaabtaada e-mailkaaga. Tusaale degdeg ah:
Baaskiil: Waxaad u baahan tahay oo keliya inaad "dejiso" aagga si loo isticmaalo:
- Riix badhanka "soosaaray"Diyaargarow!
e) muraayadda planet.osm
El download bogga BBBike waxay bixisaa xog ururin ah Qorshaha Guud ee OpenStreetMap ee qaabka XML OSM iyo sidoo kale kombuyuutarka ikhtiyaariga ah. Waxa kale oo ku jira xayeysiisyo ka badan magaalooyinka 200 iyo gobolada adduunka oo dhan.
Kuwani waxay ku jiraan walaac ballaaran, macluumaadka ku saabsan BBBike. Haddii aad rabto inaad isku daydo, ha ka baqin inaad soo dejiso "madax bannaan" marka aad booqato web codsiga. Mar dambe ku arki
Post Previous«Previous Ma inaan bedelnaa ereyga "Geomatics"?
Post Next Daabacaadda cusub ee BIM: BIM luqad fududNext »